समाज Archives - Page 176 of 255 - Dna Nepal
निर्मला पन्तको विषय अनावश्यक उचालियो–गृहमन्त्री बादल १७ आश्विन २०७५, बुधबार ०७:००
भरतपुर, असोज १७ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको विषयलाई अनावश्यक रुपमा उलाचेलेर राजनीतिकरण गरिएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएर सरकारले आफ्नो काम गरिरहेका बेला निर्मला हत्याकाण्डलाई..
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी श्रेयाको शव आफन्तले बुझ्दै
पोखरा, असोज १७ । पोखरा २२ पुम्दीभुम्दीकी १० बर्षिय बालिका श्रेया सुनारको शव आफन्तले बुझ्दैछन् । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी उनको शव ९ दिनपछि आफन्तले बुझ्न लागेका हुन् । बुधबार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालबाट उनीहरुले शव बुझ्न लागेका हुन्..
पोखराका सहकारी चोर–कसरी समातिए ठगुन्ना ? (पूरा घटना पढ्नुस्)
पोखरा, असोज १७ । चोर्ने पनि विभिन्न कारण हुन्छन् । कोही खान नपुगेर चोर्छन् कोही धनाढ्य बन्न चोर्छन् । कोही चाहीँ फुर्मासीका लागि ज्यानको बाजी थापेर पैसा चोरी गर्छन् । पोखरामा पछिल्लो समय दिनहुँ जस्तै मनि चेन्जर र सहकारी लुटियो । दिनहुँ चोरी..
अरिङ्गालवाली सिर्जना, एक प्लेटकै ५ सय रुपैयाँ
बेनी, असोज १७ । अरिङ्गाल व्यवसाय गर्दै आएकी बेनी नगरपालिका–७ वीरेन्द्र चोककी सिर्जना भट्टचनले पछिल्लो समय ‘अरिङ्गालवाली’ को पहिचान बनाएकी छिन् । लामो समयदेखि होटल व्यवसायमा आबद्ध उनी पछिल्लो समय अरिङ्गालवाली भनेर चिनिनुको कारण हो,..
के हुँदैछ पुष्पा केसी र मायाबोधी लामा मृत्युको घटना ? १६ आश्विन २०७५, मंगलवार १५:२१
पोखरा, असोज १६ । अघिल्लो साता पोखरा पुम्दीभुम्दीमा १० बर्षिया बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरियो । प्रहरीले केही घण्टा भित्रै अपराधी समात्यो । भोलिपल्टै खुदीमा श्रीमतिको हत्या गरे । तत्कालै प्रहरीले अपराधी पक्राउ गर्यो । केही घटनाहरुमा..
बाँके, असोज १६ । बाँकेमा १४ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका(१८ की बोल्न नसक्ने बालिका बलात्कृत भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । बालिका बलात्कारको आरोपमा बाँके प्रहरीले नेपालगञ्ज उपहानगरपालिका १८ लब्धवाका ६५..
गाडी दुर्घटनामा ८ घाईते
पोखरा, असोज १५ । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भएको दुर्घटनामा ८ जना घाईते भएका छन् । लमजुङको बेशिशहरमा जीप पल्टिँदा २ जना घाईते भए । दोर्दी जाँदै गरेको ग १ ज ६००८ नम्बरको जिप अनियन्त्रित भई पल्टिँदा दोर्दि गाउँपालिकाकाी ७५ बर्षिया धनकुमारी..
पत्रकार सापकोटाले बाबुको सम्झनामा अक्षयकोष बनाए
पोखरा, असोज १६ । पोखरा–२५ हेमजाका देविलाल (कलाधर)सापकोटाको स्मृतिमा देविलाल स्मृति अक्षयकोष स्थापना गरिएको छ । लायन्स क्लब अफ पोखरा लालिगुराँसको गभर्नस क्लब भिजिट तथा सम्मान कार्यक्रमका बेला स्वर्गीय देविलाल सापकोटाका परिवारले अक्षयकोष..
गाईभैंसीलाई पनि २५ सय भत्ता
पर्वत, असोज १६ । पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा रहेको पशु सेवा शाखाले पशुहरूमा कृत्रिम गर्भाधारण सेवालाई कृषकहरु माझ पुर्याउन आकर्षण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कृषकहरुलाई कृत्रिम गर्भाधान प्रति आकर्षण गराउन सुत्केरी गाईभैंसीलाई भत्ता..
पोखराको पालिखेचोकमा युवकको हत्या
पोखरा, असोज १६ । पोखरा महानगरपालिकाको पालिखेचोकमा एक युवकको हत्या भएको छ । नदिपुरमा बसेर कवाडीका सामान उठाउदै आएका राजकुमारको हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनको सोही ठाउँमा रहेको एक टहरोमा रगत नै रगत र शरिरमा चोट नै चोट भएको..